१५ खर्बको बजेट, बृद्ध भत्ता बढ्यो, करको दर सामान्य
जेठ १५, २०७६ | काठमाडाैं
सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ का लागि संसदको संयुक्त बैठकमा बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बुधबार २०७६÷०७७ का लागि १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड ७१ लाखको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् ।
अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले चालूतर्फ ९ खर्ब ५७ अर्ब १० करोड १४ लाख, पूँजिगततर्फ ४ खर्ब ८ अर्ब ५९ लाख बजेट विनियोजन गरेका हुन् । बजेट भाषण गर्दै डा. खतिवडाले स्रोत व्यवस्थापनतर्फ ९ खर्ब ८१ अर्ब १३ करोड ८३ लाख रुपैयाँ राजश्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको बताए । बैदेशिक अनुदानतर्फ ५७ अर्ब ९९ करोड ५५ लाख उठाउनेछ, उनले भने ।
आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ का लागि १३ खर्ब १५ अर्बको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए ।
गत वर्षको भन्दा अनुमानित २ खर्ब ले बढी बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
बजेटले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई ३ हजार पु¥याएको छ । यसमा एकल महिलालाई २ हजार पाउने भएको छ ।
यसैगरी सरकारी कर्मचारीको तलबतर्फ क्रमशः राजपत्र अनंकित २० र राजपत्रांकित १८ प्रतिशत बृद्धि भएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षबाट शुरु गरिएको स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमको वृद्धि गरी प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा ६ करोड पुर्याउन ९ अर्ब ९० करोड बिनियोजन गरिएको छ ।
एक भन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लामा संयुक्त रुपमा आयोजना छनोट गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । स्थानीय तहसँगको लागत सहभागीतामा सवै स्थानीय तहको न्यूनतम पूर्वाधार विकास गरिनेछ ।
मानवविकास सूचकांकमापछि परेका जिल्लाहरुको भौतिक पूर्वाधारको निर्माणमा जोड दिइने छ ।
सबै प्रदेशमा संचारग्राम स्थापना गरिनेछ । लोककल्याणकारी विज्ञापनमा १५ प्रतिशत बृद्धि गरिएको छ ।
नेपालको आफ्नै स्याटलाइट स्थापना गरिनेछ । श्रमजीवी चलचित्रकर्मीलाई सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको दायरामा ल्याइनेछ ।
जनता आवास अन्र्तगत ३० हजार घर बनाउन ४ अर्ब ३० करोड विनियोजन गरेको छ ।
जोखिमयुक्त स्थानमा रहेका परिवारलाई जोखिममुक्त बनाउने ५० करोड छुट्याएको छ ।
अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले आवास पुननिर्माणका लागि १ खर्ब ४१ अर्ब विनियोजन गरेको छ । धरहरा निर्माण गर्न १ अर्ब विनियोजन गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री ८ अर्ब
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामा ८ अर्व विनियोजित गरेको छ । सुदुरको दार्चुलादेखि पूर्वको ताप्लेजुङसम्म हिमालय पदमार्ग रेखाङ्कन गरी पर्यटन विकास गरिनेछ ।
कुन सडकलाई कति ?
पूर्व–पश्चिम राजमार्गलाई डेडिकेटेड चार लेनको बनाउन १९ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । यसका साथै उनले यस्तै मध्यपहाडी लोकमार्गलाई १३ अर्ब २० करोड बजेट छुट्याइएको जानकारी दिए ।
यसैगरी गल्छी–त्रिशुली–मैलुङ सडकलाई १ अर्ब ५८ करोड, मदन भण्डारी राजमार्गका लागि ४ अर्ब ८२ करोड र बीपी राजमार्गको लागि ९६ करोड बजेट बिनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले बजेट प्रस्तुत गरेका छन् ।
टोखा–छहरे सुरुङ मार्गको विस्तृत अध्ययन गरी निर्माण गर्नका लागि बजेट छुट्याइएको छ । प्रदेश तथा स्थानीय तहको कार्यक्षेत्रमा रहेका पुलको निर्माण सम्पन्न गरी हस्तान्तरण गरिने निति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । त्यसतै २ सय पुल निर्माण गर्न ७ अर्ब ४७ करोड बजेट बिनियोजन गरिएको अर्थमन्त्रीले जानकारी दिए ।
यसका साथै रेल र जल यातायातको लागि १ खर्ब ६३ अर्ब बिनियोजन गरिएको छ । उनले उच्च प्रविधि युक्त आयोजनालाई उपकरण उपलब्ध गराउन पूर्वाधार निर्माण कम्पनी सञ्चालनमा ल्याइने जनाए ।
सरकारले निर्माण गर्ने सबै सडक कम्तिमा दुई लेनको हुने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । सडक मर्मतको लागि पेट्रोलियम पदार्थमा १ रुपैयाँ थप कर लगाइने मन्त्री खतिवडाले उल्लेख गरे ।
उदयपुर र हेटौडा सिमेन्ट उद्योगको क्षमता विस्तार गरिनेछ । औद्योगिक क्षेत्रमा पूर्वाधार विकासको लागि २ अर्ब विनियोजित गरिएको छ ।
चोभारमा सुख्खा बन्दरगाह खोलिनेछ ।
सिंचाई क्षेत्रमा २३ अर्ब विनियोजित गरिएको छ ।
घरजग्गा कारोबारमा १० प्रतिशत र अन्यत्र ५ प्रतिशत मात्र अग्रिम पुँजीगत लाभकर लाग्ने गरी व्यवस्था गरिएको छ ।
आगामी बर्षलाई बृक्षरोपण बर्ष घोषणा गरेको छ । आगामी बर्ष युवा बैज्ञानिक सम्मेलन गर्ने कार्यक्रम घोषणा गरिएको हो ।
अतिक्रमित सरकारी जग्गाहरु आगामी बर्षभित्र सरकारीकरण गरिनेछ । आगामी २ बर्षभित्र धनीपूर्जा विद्युतीकरण गरिनेछ ।
गत वर्ष झैं लोकप्रिय नारारहित तथ्यपरक बजेट भाषण प्रस्तुत गरिएको छ ।
मेगा बैंक लिमिटेड स्याफ्रुबेशी शाखाले होटललाई ( QR code) क्यूआर कोड हस्तान्तरण ...
नौकुण्ड गाउँपालिका–४ सरमथलीका ३० जना अति विपन्न एवं एकल महिलाहरुलाई कृषि सामग्री ...
मानसरोवर जाने बढे
रसुवागढी नाका हुँदै कैलाश मानसरोवर जाने तिर्थयात्री बढेका छन् । अरुबाट भन्दा रसुवागढीबाट ...
स्थानीयलाई ८२ करोड ३७ लाख
रसुवाका पाँचवटा स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा ८२ करोड ३७ लाख ...
२०७६/०७७ काे बजेट (पूर्णपाठ)
सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ का लागि संसदको संयुक्त बैठकमा बजेट तथा ...
तलब २० प्रतिशत बढ्यो
सरकारले बुधबार आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ का लागि बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिएको ...